ဂျပန်တွေအံ့သြရတဲ့ HONDA ကုမ္မဏီထက် (၇) နှစ်စောပြီး စက်ရုပ်တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ပညာရှင် - UniqueZone Info
ဂျပန်တွေအံ့သြရတဲ့ HONDA ကုမ္မဏီထက် (၇) နှစ်စောပြီး စက်ရုပ်တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ပညာရှင်
justin | September 6, 2021 | OMG | No Comments
၈၈ အရေးအခင်းကြီးမဖြစ်မှီ ၂ နှစ်အလိုကနွေရာသီ တစ်ရက်ပေါ့။ ရန်ကုန်အင်းစိန်မှာရှိသော စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်း တစ်ဖြစ်လဲ Government Engineering School ကျောင်းကြီးရဲ့တစ်နေရာမှာ လက်ထောက်ကထိကဆရာတစ်ယောက် နဲ့တပည့်တစ်စုအလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟွန်ဒါကုမ္ပဏီက သူရဲ့ပထမဆုံးရိုဘော့ P1 ကို ထုတ် လုပ်နိုင်ဖို့ ၇ နှစ်အလိုကာလက မြန်မာပြည်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ ကျောင်းက ဆရာကြီးဦးကြည်နဲ့တပည့်တစ်စုက ကားဆေးမှုတ်လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုနိုင်မယ့် Robot စက်ရုပ်တစ်ခုကို အသည်းအသန် တီထွင်နေကြတာပါ။
မော်တော်ကားဆေးမှုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာ လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့် စက်ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးနိုင်ဖို့ ဆရာကြီးဦးကြည်တို့က ရည်ရွယ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဆရာတပည့်တစ်စုဟာ စက်မှုပစ္စည်းရှားပါးလှတဲ့ မဆလခေတ်ကြီးထဲမှာ ရရာပစ္စည်းတွေလိုက်စုပြီး တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်နော်။
ရည်ရွယ်သလိုလဲ ခြောက်လအကြာမှာဘဲ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်နော်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုပြပွဲမှာ ဦးကြည်တို့ရဲ့စက်ရုပ်ဟာ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်။ ဆရာကြီးဟာ လူရဲ့အမိန့်စကားသံအတိုင်း နာခံတဲ့စက်ရုပ်နဲ့ စကားပြန်လည်ပြောနိုင်တဲ့စက်ရုပ်တွေ တီထွင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အခါမှာ ဦးနေဝင်းရဲ့မဆလအစိုးရထံက အကူအညီတောင်းခံခဲ့တဲ့အခါ အစိုးရက ငြင်းခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးတီထွင်နိုင်တဲ့ ဆေးမှုတ်စက်ရုပ်ကိုတော့ ပြပွဲတွေမှာပဲ ပြသခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ နောက်ထပ်အများကြီးထုတ်လုပ်ခွင့်ကို အစိုးရက ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့၈၈ အရေးအခင်းကြီးဖြစ်စက်မှုကျောင်းတွေလည်းပိတ်။ ဆရာကြီးကို ဂျပန်အပါအဝင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ဆီလာရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဆရာကြီးကတော့ ကျောင်းဆရာအဖြစ်ပဲပြည်တွင်းမှာ နေထိုင်ခဲ့တာပါ။
ဆရာကြီးပညာဆည်းပူးခဲ့တဲ့ အင်းစိန်ကစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံကျောင်းကြီးဟာ ဒီလိုချွန်တဲ့ထက်တဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေ၊ ပညာရှင်တွေကို မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကျောင်းကြီးမှာ စင်ကာပူ၊ လာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားက ကျောင်းသားတွေကပညာလာသင်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းကြီးရဲ့ ပုံစံ သင်ကြားမှုနည်းစနစ်နမူနာကိုယူပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံက ကျောင်းတစ်ကျောင်း စတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်နော်။
ဒါပေမယ့်လည်းနှစ်ပေါင်းနှစ် ဆယ်နီးပါးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သယံဇာတတွေပေါများပြီး တော့ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကကျောင်းသားတွေဟာ စင်ကာပူကပိုလီတက္ကနစ်ဆိုတာကြီးကို ငွေကြေးကုန်ကျခံပြီး သွားတက်နေရပါတော့တယ်။
အသေးစိတ်ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဆရာတင်နိုင်တိုးရဲ့ ပုဂ္ဂိူလ်ထူးတို့၏ဘဝတကွေ့စာအုပ်မှာ ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ နိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်ရန် လုံးဝလုံးဝမရည်ရွယ်ပါ ။ မသိသေးသူများ ဗဟုသုတရရန်နှင့် ဂုဏ်ယူနိုင်ရန်သာရည်ရွယ်၍ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၈၈ အေရးအခင္းႀကီးမျဖစ္မွီ ၂ ႏွစ္အလိုကေႏြရာသီ တစ္ရက္ေပါ့။ ရန္ကုန္အင္းစိန္မွာရွိေသာ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း တစ္ျဖစ္လဲ Government Engineering School ေက်ာင္းႀကီးရဲ႕တစ္ေနရာမွာ လက္ေထာက္ကထိကဆရာတစ္ေယာက္ နဲ႔တပည့္တစ္စုအလုပ္ရႈပ္ေနပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟြန္ဒါကုမၸဏီက သူရဲ႕ပထမဆုံး႐ိုေဘာ့ P1 ကို ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ၇ ႏွစ္အလိုကာလက ျမန္မာျပည္စက္မႈလက္မႈသိပၸံ ေက်ာင္းက ဆရာႀကီးဦးၾကည္နဲ႔တပည့္တစ္စုက ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္းမွာအသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ Robot စက္႐ုပ္တစ္ခုကို အသည္းအသန္ တီထြင္ေနၾကတာပါ။
ေမာ္ေတာ္ကားေဆးမႈတ္တဲ့လုပ္ငန္းဟာ လူေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စက္႐ုပ္ေတြနဲ႔အစားထိုးႏိုင္ဖို႔ ဆရာႀကီးဦးၾကည္တို႔က ရည္႐ြယ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဆရာတပည့္တစ္စုဟာ စက္မႈပစၥည္းရွားပါးလွတဲ့ မဆလေခတ္ႀကီးထဲမွာ ရရာပစၥည္းေတြလိုက္စုၿပီး တီထြင္ခဲ့ၾကပါတယ္ေနာ္။
ရည္႐ြယ္သလိုလဲ ေျခာက္လအၾကာမွာဘဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျပပြဲမွာ ဦးၾကည္တို႔ရဲ႕စက္႐ုပ္ဟာ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ ဆရာႀကီးဟာ လူရဲ႕အမိန႔္စကားသံအတိုင္း နာခံတဲ့စက္႐ုပ္နဲ႔ စကားျပန္လည္ေျပာႏိုင္တဲ့စက္႐ုပ္ေတြ တီထြင္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့အခါမွာ ဦးေနဝင္းရဲ႕မဆလအစိုးရထံက အကူအညီေတာင္းခံခဲ့တဲ့အခါ အစိုးရက ျငင္းခဲ့ပါတယ္။
ပထမဆုံးတီထြင္ႏိုင္တဲ့ ေဆးမႈတ္စက္႐ုပ္ကိုေတာ့ ျပပြဲေတြမွာပဲ ျပသခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္အမ်ားႀကီးထုတ္လုပ္ခြင့္ကို အစိုးရက ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ႔၈၈ အေရးအခင္းႀကီးျဖစ္စက္မႈေက်ာင္းေတြလည္းပိတ္။ ဆရာႀကီးကို ဂ်ပန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက သူတို႔ဆီလာေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေပမယ့္လည္း ဆရာႀကီးကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ပဲျပည္တြင္းမွာ ေနထိုင္ခဲ့တာပါ။
ဆရာႀကီးပညာဆည္းပူးခဲ့တဲ့ အင္းစိန္ကစက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းႀကီးဟာ ဒီလိုခြၽန္တဲ့ထက္တဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေက်ာင္းႀကီးမွာ စင္ကာပူ၊ လာအိုနဲ႔ကေမာၻဒီးယားက ေက်ာင္းသားေတြကပညာလာသင္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းႀကီးရဲ႕ ပုံစံ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္နမူနာကိုယူၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း စတည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္ေနာ္။
ဒါေပမယ့္လည္းႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ ဆယ္နီးပါးၾကာလာတဲ့အခါမွာေတာ့သယံဇာတေတြေပါမ်ားၿပီး ေတာ့ေ႐ႊေရာင္လႊမ္းတဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးကေက်ာင္းသားေတြဟာ စင္ကာပူကပိုလီတကၠနစ္
ဆိုတာႀကီးကို ေငြေၾကးကုန္က်ခံၿပီး သြားတက္ေနရပါေတာ့တယ္။
အေသးစိတ္ဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဆရာတင္ႏိုင္တိုးရဲ႕ ပုဂၢိူလ္ထူးတို႔၏ဘဝတေကြ႕စာအုပ္မွာ ရွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ခိုက္ရန္ လုံးဝလုံးဝမရည္႐ြယ္ပါ ။ မသိေသးသူမ်ား ဗဟုသုတရရန္ႏွင့္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ရန္သာရည္႐ြယ္၍ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့
ဒေသရှိအုန်းပင်မြင့်ပေါ်ကို မကြောက်မရွံ့ တက်နိုင်ဆဲဖြစ်သောအသက် ၈၀အရွယ် အဖွားအို
တိရိစ္ဆာန်ဓာတ်ပုံများကိုအသက်ဝင်လာအောင် Photoshop ဖြင့်ဖန်တီးထားသောလက်ရာအချို့